လမ်းဂန် vs မန်စီးတီးတိုက်လေယာဉ် (City Fighter vs Street Gang) - 2Game
လမ်းဂန် vs မန်စီးတီးတိုက်လေယာဉ် (City Fighter vs Street Gang)
လိမ္မော်သီးကိုဝယ်ခြင်းငှါတစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်စူပါမားကတ်ခရီးစဉ်ဒါစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်! လူတိုင်းလမ်းဂန်လိမ္မော်သီးကိုမုန်းသိတယ်, ဒါကြောင့်စူပါမားကတ်ရန်သင့်လမ်းပေါ်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်း။
လမ်းဂန် vs မန်စီးတီးတိုက်လေယာဉ်သင်လမ်းအုပ်စုဖွဲ့ရန်သင့်ရာတေးကျွမ်းကျင်မှုပယ်ဖျောပွနိုငျရှိရာပျော်စရာတိုက်ပွဲများဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သော်လည်းသူတို့ကိုလျှော့မတွက်မထားပါနဲ့! သူတို့ကအင်အားကောင်းသောလမ်းပေါ်တိုက်လေယာဉ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာလာကြတယ်ကန်လျက်လူအပေါင်းတို့အထဲကခေါက်ရန်သင့်အားတက်ပါတယ်။ ပွင့်လင်း boxes တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်တပ်ဆင်အသစ်သောလက်နက်များနှင့်ပိုပြီးအစွမ်းသတ္တိကိုရဖို့ရန်ငှက်ပျောသီးစားရန်။ အဆိုပါဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်များကနေလိမ္မော်သီးစုဆောင်းနှင့်အသစ်ဇာတ်ကောင်င့်ပါ။
သငျသညျ3ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ပွဲများစတိုင်များသူ Arya, ကောလိပ် Guy နှင့်အေးဂျင့်က S နှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါတိုက်ခိုက်ရေးအဆုံးသတ်တာပါ။ သူဌေးကစိန်ခေါ်မှုများစောင့်ဆိုင်း။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ချစ်သူတို့လိမ္မော်သီးကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ဂိုဏ်းနှင့်အကြီးအကဲတွေရိုက်နှက်!
– combo ကျွမ်းကျင်မှုရှာဖွေရန်
စီးတီးတိုက်လေယာဉ်အခမဲ့အခုဆိုရင်လမ်းဂန် vs download လုပ်ပါ။
Android အတွက် လမ်းဂန် vs မန်စီးတီးတိုက်လေယာဉ် (City Fighter vs Street Gang) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ လမ်းဂန် vs မန်စီးတီးတိုက်လေယာဉ် (City Fighter vs Street Gang) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, လမ်းဂန် vs မန်စီးတီးတိုက်လေယာဉ် (City Fighter vs Street Gang) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် လမ်းဂန် vs မန်စီးတီးတိုက်လေယာဉ် (City Fighter vs Street Gang) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ လမ်းဂန် vs မန်စီးတီးတိုက်လေယာဉ် (City Fighter vs Street Gang) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် လမ်းဂန် vs မန်စီးတီးတိုက်လေယာဉ် (City Fighter vs Street Gang) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!